जेलमा आशारामसँग यस्तो बाचा गरेर आए सलमान, गर्लान् त पूरा ? – mero sathi tv
जेलमा आशारामसँग यस्तो बाचा गरेर आए सलमान, गर्लान् त पूरा ?
On २५ चैत्र २०७४, आईतवार ०७:२४
जोधपुर सेल्ट्रल जेलमा २ दिन कथावाचक आशारामसँग बिताएर आएका बलिउड सुपरस्टार सलमान खानले आशारामसँग एउटा बाचा गरेर आएका छन् । सलमानले आशारामसँग अबका दिनमा आफूले चुरोट र कफी छाड्ने बचा गरेका हुन् । आशाराम स्वयंले यो कुराको दावी गरेका हुन् । यौनशोषणको आरोजमा जेलमा रहेका आशारामले सलमानलाई आफ्नो पाहुना बताउँदै यस्तो दावी गरेका हुन् ।
सलमान जमानतमा रिहा भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आसारामले भने ‘यहाँबाट कोही बाहिर जाँदा राम्रो लाग्छ । यो राम्रो कुरा हो । एक दिन म पनि बाहिर आउनेछु ।’ शनिबार सलमानसँगै आशारामको पनि अदालतमा तारिख थियो । अदालतमा पेस भएपछि जेल जाने क्रममा आसारामले यस्तो बताएका हुन् । आसारामको केसमा पनि सुनुवाइ सकिएको छ र यही महिनाको २५ तारिखमा फैसला सुनाइनेछ ।
आसारामले सलमान आफ्नो व्यवहारबाट प्रभावित भएको पनि दावी गरेका छन् । आसारामले भने ‘मैले सलमानलाई भनें यो सबै भगवानको लीला हो तपाइँ र म दुवै जेलमा बन्द छौं ।’ आसारामले जेल पुगेपछि जेलका स्टाफसँग पनि सलमानको बाचाको बारेमा बताए । आसाराममाथि आफ्नै आश्रमकी १६ वर्षकी किशोरीको यौनशोषण गरेको आरोप लागेको छ । आसाराम करिब ५ वर्षदेखि जेलमा छन् ।
पूर्व प्रेमिकाको खुलासा, दिनप्रतिदिन कपिलको मानसिक सन्तुलन बिग्रिदै